Chile vs Paraguay - World Cup iru eru | Soccer amụma | Bet Atụmatụ
+7/ 9584-983-763inọtutu utari;@socceributshoot.com
Match ụbọchị: 1 Sep 2017 | Ihe: 31 Aug 01:43 2017 GMT + 2 | NDỤMỌDỤ anya 3197 ugboro.
Chile vs Paraguay – World Cup iru eru
Chile vs Paraguay – World Cup iru eru , Chile bụ 4th na table na 23 ihe. Ha bụ ọlị n'aka iru World Cup ma ha na a ọma ụzọ. Key ka ha succes ndidi n'ụlọ ha arụmọrụ, ebe ha dere ise nke ha asaa Enwee Mmeri na efu naanị otu ugboro. Ọzọkwa, ha nwere a ezi-agba ọsọ na a year`s Confederations Cup, ebe ruru ikpeazụ ebe ha furu efu na Germany. Ha na-abịa n'ime egwuregwu a kpebisiri ike ime ihe atọ na-azụ Paraguay maka a meriri nke ha na-akpatara onwe ha a afọ gara aga. Ha ga na-agbalị ime na na ha sie ike otu, ebe Sánchez dị njikere, dị ka ndị niile ọzọ Player ma e wezụga Edson Puch onye na-merụrụ ahụ.
Paraguay bụ 8th na 18 ihe. Ha ka nwere usoro iwu Ohere nke na-eru World Cup ma n'ezie na o yiri nnọọ eleghi anya. N'elu N'ezie nke afọ gara aga, ha dere naanị atọ Enwee Mmeri n'ozuzu, na na ha atọ na-abịa asọmpi ọkụ. Ọzọkwa, ọ bụ na-akpali na-emesi ike na ha iti Argentina n'okporo ụzọ na na-Chile n'oge ahụ. Ya mere, ha nwere ike na-ebibi ụbọchị maka ọkacha mmasị. Pụọ n'ụlọ ha agbalịsiwo, ma oge ọ bụla ha jisiri na-a dị ọcha mpempe akwụkwọ, ha hapụrụ na ihe. Paraguay don`t nwere ọtụtụ maara nke ọma aha, na Lucas Barrios ndị ha na isi kpakpando. ekele, ọ bụ maka egwuregwu a.
Chile ga-aba game kpebisiri ike na-atọ ihe na na-na ọnọdụ ha, ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna nwere ebili na table. Paraguay ga-abịa na nke kacha mma n'ihi na ha nwere ike, ma ọ bụ ike iji na-ahụ ha na-ahapụ ya na ihe. Ụsụụ ndị agha bụ nnọọ ihe quality otu, na ọ bụ ezie na Paraguay were mmeri oge ikpeazụ ndị a abụọ zutere, ọ bụ ike ịhụ Chile ukwu elu ebe a. Kasị mkpa ha na egwuregwu ndị dị njikere na ha ga-atụle nke a egwuregwu dị ka a kwesịrị-merie, karịsịa ebe ọ maara na ha nwere a njem Bolivia ụbọchị ise mgbe e mesịrị nke bụ mgbe niile a tricky ebe-emeri. Chile ndị doro anya ọkacha mmasị na ha merie agaghị abata obi abụọ, na ebe ọ bụ na m na-ahụ ha mmeri ịbụ a ala otu m ga-azụ ha na -1 Asia handicap.
Wolfsburg vs Shakhtar Donetsk ( N'ime 2.5 ihe mgbaru ọsọ & 1.90 )